Jowhar.com - Somali news Leader - News: Shir uga furmay magaalada Istanbul dowlada Federalka Soomaaliya iyo Somaliland
December 10 2013 05:33:52
Shir uga furmay magaalada Istanbul dowlada Federalka Soomaaliya iyo Somaliland
Kulan heer wasiir ah ayaa ugaga furmay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga dowlada federalka Soomaliya iyo maamulka la magac baxay Somaliland. Shirkan oo ah wajigii labaad ayaa waxaa hogaaminaya wafdiga ka socda dowlada federalka wasiirka arrimaha gudaha C/kariin Xuseen Guuleed. Wareysi uu siiyay idaacada BBC-da ayuu wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya ku sheegay in ay tahay mid lama taabtaan ah midnimada dalka Soomaaliya balse ay dowladiisu diyaar u tahay inay tanaasul ka sameyso wixii ka soo hara intaas.
Ergada shirka uga qeybgalaysa labada maamul ayaa waxa ay degen yihiin hal hotel waxaana kulanka maanta uu yahay mid lagu diyaarinayo ajandaha shirka. Illaa iyo hadda lama oga natiijada ka soo bixi karta shirkan iyadoo dowlada federalka aysan diyaar u ahayn in ay gorgortan ka galaan kala go�ida dalka Soomaaliya halka uu maamulka Somaliland ka taagan yahay in ay lagama noqdaan tahay ka go�ida Soomaaliya.
mahad on July 08 2013
jowhar.com3,143,912 unique visits